Toriteny Alahady 12 jona 2016 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 12 jona 2016
“Manafaka amin’ny fahantrana ny asan’ny Tompo »
Salamo 70 : 1-5 ; Lioka 21 : 1-4 ; II Koritiana 8 : 1-6
Alahady natokana itondrana am-bavaka ny Sekoly SEDERA;
“Fa tamin’ny fahoriana be nizahan-toetra azy no nitomboan’ny hafaliany, ary ny hamafin’ny fahantrany no nampitombo ny haren’ny hitsim-pony”. II Koritiana 8:2
Nandritra ny fivoriana iraisam-pirenena farany teo no nanamarihana fa Madagasikara dia mbola voasokajy ao anaty firenena mahantra indrindra. Ankoatry ny harena ara boajanahary anefa dia manana tena harena ho an’ny firenena ny fananany ahy sy ianao izay Kritiana. Koa nahoana isika no mbola mahantra ? Aiza ho aiza ny fahantanterahan’ny teny fa manafaka amin’ny fahantrana ny asan’ny Tomo?
II Koritiana 8 “fa tamin’ny fahoriana be nizahan-toetra azy no nitomboan’ny hafaliany, ary ny hamafin’ny fahantrany no nampitombo ny haren’ny hitsim-pony”. Tena niaina tao fahantrana be ny Kristiana tao Makedonia, mananatra i Paoly nanao hoe manahafa ahy ianareo.
Andeha haka toerana eo an-tongotry ny Tompo isika :
Andeha haka toerana eo an-tongotry ny Tompo isika hahalala ny anton’izay fahantrana mangeja antsika tsirairay avy. Mandini-tena ka mamantatra tsara ny amin’ny tokony hitondrana ny fiainana miaraka amin’Andrianamitra amin’izao sisa izao .
Ny bokin’i Salamo 70 dia maneho amintsika fa Andriamanitra dia mitondra antsika tahaka ny zanaka, mananatra ary manafay raha misy ny tsy mety atao. Davida dia nosokajian’Andriamanitra ho isan’ny olomarina toa an’i Joba na teo aza ny fahalemeny. Nohamarin’Andriamanitra Davida satria fantany ny fahadisoany ary mibebaka izy, mazoto mihaino ny feon’Andriamanitra.
Mandini-tena ao anaty zava-tsarotra :
Raha ampandalovin’Andriamanitra zavatra sarotra ny fiainanao, manao ahoana ny fanoloran-tena ? Inona no tokony atao ? inona no tsy tokony atao ? Inona no tokony ibebahana ? Fa io fahoriana mianjady io dia mitaona antsika handini–tena handeha amin’ny lalana efa nosoritan’Andriamanitra iatrehana ny ampitso sy ny ho avy.
Ny Lioka 21 dia mitantara ilay vehivavy mpitondratena nanolotra ny fivelomany rehetra tao anaty fandatsahan-drakitra.
Ny mpitondratena tamin’izany andro izany dia olona tsy misy lanjany loatra, nefa Jesoa dia nidera azy noho ny fahafoizany ny fananany rehetra ho an’ny hafa. Harena izaho sy ianao ka raha zaraintsika ho an’ny hafa izay ananantsika, fahaizana amam-pahalalana, vola, hery sns …. dia hitombo harena isika.
Lesona ampitain’ny tenin’Andriamanitra :
Aoka hifampitsimbina, tsy hihirim-belona amin’ny ananany ny Kristiana izay mitondra ny anaran’ I Jesoa Kristy. Inona ary no ananako mba azoko zaraina ho an’ny hafa ?
Izay kely ananako no ampiasaiko ho an’Andriamanitra. Toy ny mofo 5 sy hazanadrano 2 nahavoky olona maro. Ny fahantrana dia manomboka ao anatin’ny foko, ary miitatra hatrany anaty vilaniko.
Inona no azoko omena mba ahafahan’Andrimanitra miasa amin’ny fiainako hanafahany ahy amin’ny fahantrana ?
RAHARINAIVO Falimanana Jocelyn, Talen’ny Sekoly SEDERA
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 14 juin 2016